Volahasiniaina sy i Labelle : hamoaka vokatra vaovao | NewsMada
Volahasiniaina sy i Labelle : hamoaka vokatra vaovao
Par Taratra sur 16/06/2017
Am-bolana maro ny fiaraha-miasa eo amin’i Volahasiniaina Linda, tovovavy malagasy tsy zovina intsony amin’ny fitendrena zavamaneno samihafa, sy i Labelle, avy atsy amin’ny Nosy La Réunion. Hivoaka afaka andro vitsy ny vokatr’izany.
Mifarana amin’ity herinandro ity ny « résidence artistique » na famoronana amin’ny toerana iray, izay iarahan’i Volahasina sy ry Labelle, any Paris. Naharitra herinandro izany ary, raha tsiahivina, efa andiany fahatelo raha tamin’ny volana marsa ny andiany faharoa.
Miavaka izao fiaraha-miasa eto amin’ireto mpanakanto ireto izao, satria feon-javamaneno, kolontsaina sy gadona avy amin’ny mpanakanto samy manana ny mampiavaka azy no atambatra. I Volahasiniaina, havanana amin’ny valiha, kabôsy, amponga. Labelle, mirona kokoa amin’ny mozika elektronika.
Tafiditra indrindra tamin’ny famolavolan’ny tarika Labelle ny rakikirany vaovao izao « résidence artistique », iarahany amin’i Volahasiniaina, izao. Izany hoe, hisy dian-tànan’ity mpanakanto malagasy ity izany vokatra vaovao izany. Ankoatra izany, hiara-hiaka-tsehatra ny roa tonta, ao anatin’ny « Festival Rio Loco », hatao any Toulouse.
Araka izany, ity hetsika ity no hanehoan’izy ireo voalohany ny asa vita tao anatin’izay volana maromaro izay. Aorian’izany, hitohy any amin’ny hetsika hafa ny fiarahan’izy ireo.